‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग : डेब्युमै स्काई गोल्सको उडान- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग : डेब्युमै स्काई गोल्सको उडान
स्काई गोल्समा अधिकांश खेलाडी फुटबलबाट आएका छन् । कप्तान सन्जोग र निर्मल गुरुङबाहेक अन्य सबै खेलाडी फुटबलबाट आएका हुन् ।
भाद्र ३०, २०७८ कुशल तिमल्सिना
काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आयोजना गर्न लागेको ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगकै लागि बनेको टिम हो, स्काई गोल्स एफसी । छनोट प्रतियोगितामा सनसनी मच्चाएको यो टोली उपाधि लक्ष्यसहित फाइनल प्रतियोगिता तयारीमा छ ।
स्काई गोल्स एफसी फुटसल खेलाडी तथा टिम कप्तान सन्जोग चाम्लिङकै अवधारणा होभन्दा फरक पर्दैन । ‘ए’ डिभिजन लिगका लागि छनोट प्रतियोगिता हुने भएपछि फुटसलमा सक्रिय खेलाडीहरूबीच टिम बनाएर सहभागिता जनाउने उनको प्रस्तावलाई चक्रपथमा रहेको मछिन्द्र स्काई गोल्स फुटसलले आंशिक विश्वाससहित स्वीकार गर्‍यो ।
छरिएर रहेका फुटसल खेलाडी तथा फुटबल खेलाडीसमेतको टोली फाइनल प्रतियोगिताका लागि छनोट भएको व्यवस्थापनले नै विश्वास गरिरहेका थिएनन् । ‘पहिलो सहभागितामै हामी छनोट योग्य हुन्छौं भनेर न क्लब व्यवस्थापन न त हामी (खेलाडी, अफिसियलहरू) नै विश्वस्त थियौं,’ टिमका प्रशिक्षक रमेश सिन्केमानले कान्तिपुरसग भने, ‘सोच्दै नसोचेको सफलताले हामी सबै उत्साही छौं । क्लब व्यवस्थापनले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ । अपेक्षा पनि धेरै छ ।’
चैत १ देखि वैशाख ५ सम्म देशव्यापी रूपमा सञ्चालित छनोटअन्तर्गत वाग्मती प्रदेशस्तरीय प्रतियोगितामा स्काई गोल्सले सेमिफाइनल यात्रा तय गरी पोखरामा हुने फाइनल चरणलाई छनोट भएको हो । ‘फाइनल चरणमा छनोट भइसकेपछि खेलाडीहरू आनन्दित थिए । हामीले पनि धेरै दबाब लिएनौं । छनोटको सेमिफाइनलमा ढुकु फुटसलसग पराजित भयौं । हामीलाई हराएको ढुकुले छनोटको उपाधि नै जित्यो,’ सिन्केमानले भने ।
कोर्टका कारणले टिममा सन्तुलन नमिल्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् प्रशिक्षक सिन्केमान । एन्फाले छनोट प्रतियोगिता टर्फ मैदानमा खेलाएर फाइनल प्रतियोगिता म्याट बिछ्याइएको कोर्टमा गर्दै छ । वास्तविक फुटसल पनि त्यही हो । ‘वास्तवमै भन्ने हो भो हामीलाई पहिलोपल्ट बल खेल्न थालेजस्तो अनुभव भइरहेको छ । बल कन्ट्रोल, ट्याकल, पासलगायत सबै कुरा म्याटमा खेल्दा फरक हुन्छ,’ उनले थपे, ‘हामी टर्फ मैदानमा अभ्यस्त छौं । म्याटमा अहिलेसम्म खेलेका छैनौं । प्रशिक्षक पार्केटिङ कोर्टमा गरेर म्याटको मैदानमा खेल्दा हामीबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन हुनेछ । चोटको समस्याबाट पनि धेरै नै चनाखो हुनुपर्नेछ ।’
स्काई गोल्समा अधिकांश खेलाडी फुटबलबाट आएका छन् । कप्तान सन्जोग र निर्मल गुरुङबाहेक अन्य सबै खेलाडी फुटबलबाट आएका हुन् । धेरै वर्ष ‘ए’ डिभिजन लिग खेलिसकेका संकटाका अमित तामाङ पनि स्काई गोल्सको टिममा छन् । प्रशिक्षक सिन्केमान टिममा अनुभवी र युवा जोसको समिश्रण रहेको दाबी गर्छन् । टिम भावना, जोस र लगावको मिश्रित प्रदर्शन गर्ने उनको विश्वास छ । ‘यो प्रतियोगितामा सहभागी सबैले छनोट पार गरेर आएका छन् । यहाँ सबैले सबैलाई हराउन सक्ने क्षमताका टोलीहरू छन्,’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म अवस्था हेर्दा हामीलाई शीर्ष चारभित्र पर्न त्यति कठिन नहोला । उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा कठिन हुन्छ । तर, हाम्रो लक्ष्य त्यही हो ।’
टिम गठन भएपछिको पहिलो प्रतियोगितामै सनसनी मच्चाएपछि स्काई गोल्सले भविष्यमा निरन्तरता दिनेमा व्यवस्थापन पक्ष पनि सकारात्मक रहेको बताउँछन् सिन्केमान । सञ्चालक प्रवलमानसिंह गुरुङले अहिलेसम्म कुनै कुराको कमी हुन दिएका छैनन् । ‘छनोटपछि कोरोनाले लकडाउन भयो । दुईपल्ट मिति तोकेर पनि आयोजना भएन । अहिले १ महिनादेखि नियमित प्रशिक्षण भइरहेको छ । अहिलेसम्म व्यवस्थापनले यो गरेन/त्यो गरेन भनेर गुनासो गर्नुपरेको छैन । उहाँहरूले हामीलाई धेरै नै विश्वास गरिरहनुभएको छ,’ सिन्केमानले भने ।
‘ए’ डिभिजन फुटसल निरन्तर आयोजना भएको अवस्थामा आफ्नो टिमले पनि निरन्तरता पाउने पूर्वखेलाडी सिन्केमानले बताए । त्यसबाहेक वास्तविक फुटसल कोर्टहरू निर्माण गरी नयाँ खेलाडी उत्पादनमा क्लब व्यवस्थापनले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यो टिमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
नयाँ कोर्ट बनाएर खेलाडी उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ । त्यो भयो भने फुटसल टिम बनाउन हामीले फुटसल खेलाडीको भर पर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘फुटबल खेलाडीलाई म्याट कोर्टमा खेल्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले नियामक निकायले पनि खेलाडीलाई फुटबल र फुटसलमध्ये एउटा रोज्न लगाउनुपर्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ११:०९
कपिलवस्तुमा अक्सिजन उत्पादन सुरु
कपिलवस्तु — कपिलवस्तुमा पहिलोपटक अक्सिजन उत्पादन थालिएको छ । सदरमुकाम तौलिहवास्थित जिल्ला अस्पतालमा नयाँ जडान गरिएको मेसिनबाट सातासम्मको परीक्षण उत्पादनपछि नियमित उत्पादन थालिएको हो ।
१ करोड २८ लाख रुपैयाँ लागतमा फेयर ट्रेड प्रालिले प्लान्ट जडान गरेको हो । २० एमएमक्यू क्षमताको मेसिनले प्रतिमिनेट दुई सय लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने बताइएको छ । चीनबाट आयात गरिएको मेसिनमा कम्प्रेसर, फिलिङ ड्रायर, एडप्सन ड्रायर, फिल्टर, सेप्रेसन सिस्टम, गेस बफर टेङ्क, स्टेरिलाइजिङ फिल्टर र ट्रान्सफर्मर रहेको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर देवेन्द्र श्रेष्ठले बताए । गत असार ८ गते सम्झौता भई असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा दिइएकामा प्राविधिक कारणले ढिलो भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डन्ट डा. किशोर बन्जाडेले बताए ।
निर्माण कम्पनीले मेसिन जडान गरी उत्पादन गर्न जीसी रिसर्च एण्ड डेभलप्मेन्टलाई जिम्मा दिएको थियो । अस्पतालमा न्यून मात्रामा अक्सिजन खपत भइरहेकाले अहिले थोरै मात्रामा उत्पादन गरिएको छ । गत वैशाखमा संक्रमण तीव्र हुँदा जिल्लामा अक्सिजनको समस्या परेको थियो । एकपटकमा १० वटा सिलिन्डर भर्न सकिने क्षमता छ । आवश्यकताअनुसार उत्पादन बढाउँदै लगिनेछ । अस्पतालमा १ सय ४० वटा साना–ठूला सिलिन्डर छन् । पूर्ण क्षमतामा चलाउन सके जिल्लाका अन्य अस्पताललाई पनि अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकिने डा. बन्जाडेले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ११:०७